Green Way - အကျိုးပြုအဏုဇီဝပိုးမွှား(EM) အဆင့်ဆင့်ပွားနည်းများ
အစိမ်းရောင်လမ်း 09/02/2018 14:42 PM Content Provider - Greenovator
Photo - Embottle
Effective Microorganisms (EM) ၁. ၂. ၃. ၄. ၅. ၆
ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ ခဏခဏအမေးများနေတဲ့ (EM) ပွားနည်းလေးတွေကို သိသမျှ မျှဝေပေး ပါမယ်။ မမျှဝေခင် (EM) အကြောင်းတော့ သိသမျှ ဖောက်သယ်နည်းနည်း ချပေးချင်ပါတယ်။ (EM) ကို စတင်တွေ့ရှိသူ ဂျပန်နှိင်ငံသား ဒေါက်တာ တယ်ရူးဟီးဂါး (Dr.Teruo Higa) က1982 ခုနှစ်မှာ (EM) ကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ (EM) ရဲ့ဖခင်ကြီးဆို မမှားနှိင်ပါဘူး။ ထို (EM) ကို ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဓါတုအဆိပ်သင့်ပြီး ယိုယွင်းနေတဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဘက်မှာ အသုံး ပြုရန် ရည်ရွယ်သုံးရာကနေ (Organic Farming) အော်ဂဲနစ်လယ်ယာဘက်မှာပါ အသုံးပြုလာ ကြပါတယ်။ ထိုမှတဆင့် အသုံးပြုသူများပြားလာကာ လူတိုင်းနှုတ်ဖျားမှာ (EM) က တွင် ကျယ်လာပါတယ်။ (EM)ဆိုတာ အကျိုးပြုအဏုဇီဝပိုးမွှားတွေ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးဘက်ရော စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဘက်မှာပါ အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ စစ်မှန်တဲ့(EM) ကိုရရှိမှသာ မှန်ကုန်တဲ့ အသုံးဝင်မှု့ကို ပေးမှာပါ။ (EM) ဆိုတာ (Effective Microorganisms) အကျိုးပြုအဏုဇီဝပိုးမွှားလို့ အဓိပ္ပယ်ရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အော်ရဂျင်နယ် EM1(Original EM1) ဂျပန် EM1 ကို အဆင့်ဆင့်ပွားယူလို့ရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် (EM1) ရှိပြီဆိုလျှင် အောက်ပါအတိုင်း ပွားယူနိုင်ပါသည်။
အော်ရဂျင်နယ် EM1(Orginal EM1) တစ်လီတာ၊ တင်လဲရေ/ ထန်းလျှက်အညိုကျိုရေ/ သကြားအညိုကျိုရေ/ သကာရေ ရနိုင်ရာ တစ်လီတာ၊ ရေသန့် ၂၀ လီတာ အားလုံးကိုရောပြီး အေး၍ ခြောက်သွေ့သော နေရောင်တိုက်ရိုက်မထိသော နေရာတွင် ရက် ၃၀ ထားပါ။ ရက်ပြည့်လျှင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ (Em2) အီးအမ်အပြင်းကို ပိုးဆေး၊ မှိုဆေး၊ ငါးအမိုင်နို အက်ဆစ် ဖော်စပ်ရာတွင် ရောစပ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
EM2 အီးအမ်အပြင်း တစ်လီတာ၊ တင်လဲရေ/ ထန်းလျှက်အညိုကျိုရေ/ သကြားအညိုကျိုရေ/ သကာရေ ရရာတစ်လီတာ၊ ရေသန့် ၂၀ လီတာ အားလုံးကိုရောပြီး အေး၍ခြောက်သွေ့သော နေရာ၊ နေရောင်တိုက်ရိုက် မထိတွေသောနေရာတွင် ၇ ရက်တစ်ပတ်ထားပါ။ ရက်ပြည့်လျှင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ (Em3) အသင့်သုံးအီးအမ်ကို မြေပြင်ချိန် အနံဆိုးများနှင့် မွေးမြူရေးခြံ များ၊ အော်ဂဲနစ် စိုက်ပျိုးရေးဆေးများ အသုံးပြုရာတွင် မူလဆေးအစွမ်းထက်ရန် ရောစပ်အသုံး ပြု နိုင်ပါသည်။
EM2 အီးအမ်အပြင်း တစ်လီတာ၊ တင်လဲရေ/ ထန်းလျှက်အညိုကျိုရေ/ သကြားအညိုကျိုရေ/ သကာရေ ရရာတစ်လီတာ၊ ဆန်ဖွဲနု (သို့) ဂျုံဖွဲနု နို့ဆီဘူး ၄ ဘူး၊ ပဲဖတ်၂၀ သား၊ ရေသန့် လီတာ ၂၀ အားလုံးကိုရောပြီး အေး၍ချောက်သွေ့သော၊ နေရောင်တိုက်ရိုက်မထိတွေ့သော နေရာတွင် ရက် ၃၀ ထားပါ။ မွေးမြူရေးအစာအားလုံးတွင် ရောစပ်ပြီး တိရိစ္ဆာန်အားတိုးအားဖြည့်ဆေး အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
EM2 အီးအမ်အပြင်း တစ်လီတာ၊ တင်လဲရေ/ ထန်းလျှက်အညိုကျိုရေ/ သကြားအညိုကျိုရေ/ သကာရေ ရရာတစ်လီတာ၊ ရှာလကာရေ ၅၀၀ စီစီ၊ အရက်ဆီ ၅၀၀ စီစီ၊ ရေသန့် လီတာ ၂၀ အားလုံးကိုရောပြီး အေး၍ချောက်သွေ့သော/ နေရောင်တိုက်ရိုက်မထိတွေ့သော နေရာတွင် ၁၅ ရက်/ လဝက်ခန့် ထားပြီး ပိုးသတ်ဆေး၊ ပိုးပြေးဆေးအဖြစ် အသုံးပြုပါ။ အော်ဂဲနစ် ပိုးဆေး အားလုံးနဲ့ တွဲဖက်ပြီးအသုံးပြုနိုင်သည်။
(EM6) ပေါင်းမြက်နှင့်ပြုလုပ်သော အပင်အားဖြည့် ပိုးပြေးအီးအမ်
EM2 အီးအမ်အပြင်းတစ်လီတာ၊ တင်လဲရေ/ ထန်းလျှက်အညိုကျိုရေ/ သကြားအညိုကျိုရေ/ သကာရေ ရရာတစ်လီတာ၊ ပေါင်းပင် စင်းပြီးသား တစ်တင်း၊ ရေလီတာ ၂၀၊ စဉ့်အိုးကြီး တစ်လုံး၊ ပေါင်းပင်စင်းပြီးသားတွေကို စဥ့်အိုးထဲအောက်ခံထည့်ပြီး ကျောက်ခဲတစ်လုံး နဲ့ ဖိထားပါ။ Em2 နှင့် တင်လဲရေ ရေလီတာ ၂၀ အရောကို အပေါ်ကထဲ့ပြီး လေလုံအောင်ပိတ်ပါ။ အေး၍ချောက်သွေ့သော နေရောင်တိုက်ရိုက်မထိတွေ့သောနေရာတွင် ၄၅ ရက် တစ်လခွဲထားပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အပင်အားကောင်းဆေးနှင့် ပိုးပြေးဆေးအဖြစ် ရောစပ်အသုံးပြုနိုင်ပါ သည်။
မှတ်ချက်။ ။ ပေါင်းမြက်ထည့်ရာတွင် ပိုးပြေးအာနိသင်ရှိသော အပင်များကို အသုံးပြုလျှင် ပိုးအတွက်ပိုကောင်းပြီး အသီးအနှံများနှင့် အရွက်စိမ်းများအသုံးပြုလျှင် အပင်နှင့်အပွင့်အသီး အတွက် ပို၍ကောင်းသည်။ မိမိလိုသလို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မန္တလေး ထုံးဘို ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်သင်တန်းကျောင်းမှ ဦးစီးမှုးဆရာမကြီး ဒေါ်မြင့်မြင့်မေ အား ဂါရဝပြုပါသည်။
#Phyochitthu facebook page မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးခြင်းဟာ မြေဆီလွှာအတွက် မကောင်းဘူးလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ
မြေကြီး အစိုဓာတ် ဆုံးရှုံးမှုကို လျော့ချနိုင်မည့် နည်းလမ်း သုံးသွယ်
“နီတို၊ ဝါတို၊ စိမ်းတို”တွေရဲ့ပြဿနာမြေများ
နွားချေးကို စနစ်တကျ သိုလှောင်နည်း
ကမ္ဘာမြေကြီးတွေက ကျောက်သားတွေကို တိုက်စားတာတွေကြောင့်ဖြစ်လာတာပါ…. (၁)
စုပ်ခွက်ငါးပြဿနာဖြေရှင်းရန် သုတေသနလုပ်၍ အဖြေရှာမည်ဟုဆို
တန်ဖိုးမြင့် သရက်ထုတ်ကုန် ၁၀ မျိုးခန့် ဈေးကွက်စတင်ဖြန့်ချီမည်
မြန်မာ့စိန်တလုံးသရက် ဂျာမနီနိုင်ငံကိုတင်ပို့သွားနိုင်ရန် စစ်ဆေးမှုများလုပ်နေ
မြန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတုစံနှုန်းတွေ ပြောင်းလဲမှုများအတွက် တောင်သူများသိရန်လို
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ (၁)